Faallo:-Maxaa dhaawacay Rajadii laga qabay hirgalinta Barnaamijka Hiigsiga 2016-ka?. | puntlandi.com
Saturday, June 13th, 2015 | Posted by admin admin
Horaantii bishii Sagaalad ee sanadkii 2012-ka ayaa Madaxweynaha Soomaaliya loo doortay Xassan Sheekh Maxamuud,kaasi oo si lama filaan ah uga soo dhexbaxay Siyaasiyiin badan oo kula tartamay Jagada Madaxnimada Soomaaliya.
Xassan Sheekh Maxamuud ayaa Doorashadda ka dib Waxqabadkiisa Saldhig uga dhigay Lix tiir oo kala ahaa;
1-Amaanka iyo Garsoorka.
2- Nabadaynta iyo Dib u Heshiisiinta.
3-Soo noolaynta adeegyada Bulshada.
4-Midnimada iyo Wada jirka umada.
5-Abuurida Xiriir Caalami ah.
6- iyo Soo noolaynta Dhaqaalaha Dalka.
Mudadii ay shaqaynaysay Dawlada Federaalka ayaa waxaa ka horyimi Caqabado badan,kuwaas oo ay qaarkood wali xal u la’dahay,hasa yeeshe waxaan Faalladan uga hadli doona rajada laga qabi karo in Dawladu ay hirgaliso Barnaamijka Hiigsiga 2016-ka,xilli muddo kooban ay ka dhiman tahay Xilhaynta Dawlada.
Maxaa laga filayay inay qabato Dawladu?.
Dawlada Federaalka Soomaaliya ayaa waxaa Xilhaynteeda ka dhiman muddo dhan 1-sano iyo laba Bilood,waxaana laga filayay in waqtiga u dhiman ay ku hirgaliso Ajandayaal ay ugu muhiimsan tahay;-
-In Dawladu ay gacanta ku dhigto Gobolada ay gacanta ku hayaan Shabaab.
-In Maamulada dhiman ee Xubnaha ka noqonaya Dawlada Federaalka la dhamaystiro.
-In Dib-u-eegis lagu sameeyo Dastuurka,ka dibna Afti loo qaado
-Iyo In dadka la tiriyo,dabadeedka Doorasho Hal Cod ah loo dareero.
Iyada oo ay dhiman tahay waqti kooban,sida lagu gaaro fulinta qodobada horyaala Dalwada Federaalka Soomaaliya ay adag tahay,hadana waxaa Dawlada ka horyaala Caqabado adag,kuwaas oo u baahan in xal deg deg ah laga gaaro.
Caqabadaha horyaala Dawlada Federaalka.
30, July,2014,ayaa Dawlada Federaalka Soomaaliya ay soo Bandhigtay heshiis ay sheegtay in Maamul loogu samaynayo Gobolada Dhexe ee Soomaaliya,gaar ahaan waxay ugu yeertay Gobolada Mudug iyo Galgaduud.
Heshiiska oo ka dhacay Madaxtooyada Muqdisho,ayaa waxaa goob joog ka ahaa Madaxweyne Xassan Sheekh Maxamuud,Cabdiweli Sheekh Axmed oo waqtigaa ahaa Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya,Xubno ka tirsan Beesha Calamka,Galmudug iyo Ximan iyo Xeeb.
31,Julay,2014 ayaa Dawlada Puntland ay xiriirka u jartay Dalwada Federaalka Soomaaliya,waxaana Puntland ay Warsaaxaafadeedka ay ugu jartay Xiriirka Federaalka ay ku sheegtay in Dawlada Soomaaliya ku xadgudubtay dhul ka tirsan Puntland,taasina ay tahay arrin aan sinaba loo aqbali Karin.
Bishii October sanadkii 2014-ka ayaa Puntland iyo Federaalka ay wada galeen heshiis laba Geesood ah,kaasi oo Federaalku ay ku cadeeyen in Maamulka loo dhisayo Gobolada Dhexe uu ka kooban yahay Galgaduud iyo Koonfurta Mudug,waxaana heshiiska labada dhinac wada saxiixay Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed iyo Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ‘’Gaas’’,waxaana heshiiska goob joog ka ahaa Beesha Caalamka.
Dib u xusuuin qodobka heshiiska ee Federaalku ay ku cadeeyen Maamulka loo dhisayo Gobolada Dhexe ee Soomaaliya ayaa u qornaa sidan;
Dhismaha Dowladdaha Xubin ka mid noqonaya Federaalka: Waa in uu ku salaysan yahay sida uu dastuurka qabo, Dowladda Puntland iyo Federaalka waxay isla qaateen in maamulka KMG ee gobolada dhexe ee ay hogaaminayso Dowladda Federaalka uu ka kooban yahay Galgaduud iyo Koonfurka Mudug, Waqooyiga Mudugna uu ka mid yahay Puntland.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa Warsaxaafadeed uu waqtigaas soo saaray ku sheegay inuu soo dhowaynayo heshiiska ay wada gaareen Puntland iyo Federaalka.
Madaxweynaha Soomaaliya Xassan Sheekh Maxamuud ayaa furay Bartamihii bishii April shirka Cadaado ee Maamul u samaynta Gobolka Galgaduud iyo Koonfurta Mudug,waxaana shirka qaadacay ururka Ehlu Sunna Waljameeca oo awood badan ku leh Gobolada dhexe muddo badana ka talinayay.
Dhamaadkii bishii April ayaa Madaxweyne Xassan Sheekh Safar uu ku yimi Puntland ku sheegay in Gobolka Mudug ay si wada jir ah u wada sheegtaan Puntland iyo Gal-Mudug,wuxuuna xusay in maamulka loo samaynayo Gobolada Dhexe uusan saamayn ku yeelan doonin Dhulka uu ka arrimiyo Maamulka Puntland.
Inkasta oo Dalwada Federaalka ay heshiisyo ay la gashay Puntland ku cadaysay Xuduuda Maamulka loo disayo Gobolada Dhexe,hadana heshiisyadaasi waxba kama hirgalin oo waxay ka mid noqdeen heshiisyadii aan natiijada lahayn ee horay u wada gaareen Puntland iyo Dawlada Federaalka.
Sida uu qabo Dastuurka Federaalka waxaa Maamul noqon kara laba Gobol iyo wixii ka badan,waxaa Calaamatul Su’aal saaran yahay sida Maamulka loo dhisayo Galgaduud iyo Koonfurta Mudug loo waafajinayo Dastuurka Soomaaliya?.
Ehlu Sunna Waljameeca .
Ehlu Sunna Waljameeca oo muddo badan ka arriminayay Gobolada Dhexe ee Soomaaliya,ayaa horay u qaadacay shirka Maamul u samaynta Gobolada Dhexe,waxaana dhowaan ay dagaal ku qabsadeen degmada Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud.
Hogaanka Ehlusunna ayaa sheegay in Lix Bilood ka dib ay xaqiijiyeen gacan ku haynta degmada Dhuusa mareeb oo ay horay uga arrimin jireen,laakiinse Dalwada Federaalka iyo Beesha Caalamka si wada jir ah ayay uga soo horjeensadeen talaabada ay qaaday Ehlu Sunna Waljameeca.
Ehlusunna ayaa sido kale gacanta ku haya qaybo ka mid ah Gobolka Galgaduud ee Gobolada Dhexe ee Soomaaliya,waana cudud aan la dhayalsan Karin.
Xildhibaano ka tirsan Dawlada Federaalka Soomaaliya ayaa 6/6/2015-ka sheegay inay Mooshin ku diideen Baarlamanka Jubbaland,arrintaas oo ay ka dhalatay in Jubbaland ay xiriirka u jarto Dalwada Federaalka Soomaaliya.
Madaxweyne Xassan Sheekh Maxamuud ayaa si Siyaasadaysan uga hadlay Mooshinkii la sheegay in lagu diiday Baarlamanka Jubbaland,waxaana hadalka Madaxweyne Xassan Sheekh uu si wayn uga caraysiiyay Mas’uuliyiinta Jubbaland.
Madaxda Jubbaland ayaa Madaxweyne Xassan Sheekh ka dalbaday inuu cadeeyo Mawqifkiisa ku aadan Mooshinkii Xildhibaanadu ay ku diideen Baarlamanka Jubbaland.
Guddiyada Federaalka ee la diiday.
Guddiyada Doorashooyinka , Adeega Garsoorka , Xuduudaha iyo Federaalka ee ay magacowday Dawladda Federaalka Soomaaliya,ayaa waxaa qaadacay Maamulada Puntland iyo Jubbaland oo sheegay innaan laga tashadan talaabada lagu soo magacaabay Guddiyaas,mana jirto wada hadal iyo xal laga gaaray xaaladaas.
Puntland iyo Jubbaland ayaa sheegay innaan lagala tashayn Guddiyada ay magacowday Dawlada Soomaaliya sida ku cad heshiiskii ay Muqisho ku wada gaareen Madaxweynaha Soomaaliya iyo Madaxda Dawladaha Xubnaha ka ah Federaalka.
Waxaa xusid mudan in 5/6/2015-ka Golaha Xukuumadda Soomaaliya ay Qoraa Maxamed Daahir Afrax ay u magacaabeen Guddoomiyaha Guddiga Dib-u-eegida Dastuurka Soomaaliya,kaasi oo aan la aqoon in lagala tashtay Puntland,wuxuuna badalayaa Caasho Geele Diiriye oo xilkaa horay isaga casishay.
Dawlada Puntland ayaa Warsaxaafadeed ay soo saartay dhamaadkii todobaadkii tagay ku sheegtay in Shuruucdii ay ku heshiiyeen umada Soomaaliyeed looga leexday Aragti qofeed iyo baahi qabiil,waxaana Puntland ay sheegtay haddii xaaladdu ay sidan kusi socoto ay uga guurayso talaabo ku dhisan wada tashi ay la yeelato shacabkeeda.
Caqabadaha aan kor ku xusnay waxay ka mid yihiin kuwa ugu waawayn ee horyaala Dawlada Federaalka Soomaaliya ee waqtiga kooban uu u dhiman yahay.
Ma jiro dadaal ay Dawladu ku doonayso inay ku xaliso Caqabadaha jira,xilli Jubbaland ay cod dheer ku sheegtay in geedi socodka Siyaasadeed ee Muqdisho uu yahay mid lagu dhabar jabinayo Nidaamka Federaalka ee ay ku heshiiyeen umada Soomaaliyeed.
Aqoonyahan badan ayaa qaba in marka la qiimeeyo waqtiga u haray Dalwada Federaalka Soomaaliya,sida ay shaqadu u socoto iyo Caqabaha horyaala uu fashilmay hirgalinta Barnaamijka Hiigsiga 2016-ka.